IVietnam - njenge-War Museum - 1aviagemPlay
I-Vietnam - Iyini iMar Museum?
Kuthunyelwe I-29 2018 ngo-September 1 amazwana por Rômulo Lucena
Kulesi Thumela sizoxoxa ngempi, ikakhulukazi iMpi YeVietnam.
Sivakashela iMpi Yesikhumbuzo SeMpi YaseMelika eHo Chi Min futhi sanikeza ezinye zezifundo kuwe.
Lapha saba nesifiso futhi nethuba lokuya e-War Museum bese singena ekamu lokuhlushwa.
Into yokuqala ukuyibuka kulo myuziyamu ukuzwa okusiletha kithi. Kubonakala sengathi usemdlalweni wezempi ku-3D (Ngokuvamile, kufana ne-Command and Conquer Zero Hour, endala kodwa epholile kakhulu.
Bheka, lapha ubona izingxenye zokulwa ngendlela efana ngayo. Lona ngumthombo lapho umdlalo uphuma khona zonke lezo zikhali kanye nezikhali ezahlukene.
Kungenzeka ukuthi wezwa ngeMpi Yezwe II. Futhi inkathi yayo ngemva kwempi eyabangela ukucindezeleka phakathi kwe-United States neSoviet Union.
Okungenzeka ukuthi awukuzwanga ukuthi le mpi yathinte izwe elingenalo NOKUBENZA nomlando wakhe. Saxoxa ngeVietnam.
Ngaphambi kweMpi Yezwe II base beyiMpi elwa neFrance. Ngenxa yalokhu, kwakukhona amakamu okuhlushwa eVietnam kusukela ngekhulu le-19. . Kodwa kwabi nakakhulu ngisho naku-1930 kuze kube yi-1945. Uma kunombiko wempi yokuqala phakathi kweColony vs Metropolis. Isizathu Sakhe? Ukuzimela. Babekhathele ngokuba yi-colony nje yamaFrance.
Kuvela ukuthi iFrance unikezwe, Ngithi, wahlasela ngisho neJalimane phakathi neMpi Yezwe Yesibili. Amazwe ase-Axis athatha ama-coloni aseFrance, phakathi kwawo iVietnam.
Kulesi slicing eJapane, umlingani waseJalimane, ngubani owabusa phezu Vietnam. Ngoba kwakuyingxenye yamazwe akha i-axis. Kodwa amaVietnam ayengekho nje ukuze ashintshe izandla, ayefuna ngempela ukuzimela kwabo. Yingakho iVietnam ngokwabo yanquma ukuhlukanisa insimu ibe yibili. UVietnam, ogama lakhe linguHanoi. Futhi iNingizimu neVietnam, eyayiyinhloko yeSaigon (Okwamanje i-Ho Chi Min). Ingabe leyo ndaba yokuhlukanisa ukunqoba iyazi? La maqembu amabili athembisa ukuhlangana kabusha ku-1956 ngokhetho oluvamile, kwakuthemba ukuthi base bevele bafaka abahlaseli ukuba basebenze (Be of France, Japan noma abanye). Kodwa lokho akuzange kwenzeke. Ngokuphambene nalokho, kwaholela empini yangaphakathi yomphakathi. Bekulapha lapho i-United States neSoviet Union bangena khona ukuze bathuthele ngaphezulu. Ngamunye wakhetha ingxenye "yokusiza". I-United States yahamba ukusiza iNingizimu Vietnam neSoviet Union baya ukusiza eNyakatho.
Ngamafuphi, kwakukhona izimpi ezilwa noFrance, iJapane, iVietnam, i-United States neSoviet Union. KwakuyiMpi yonke indawo! Ngenxa yalokhu uHo Chi Min (umholi waseVietnam) wabiza bonke abantu ukuba balwe! Futhi waqala isiqubulo esithi "Ukuzimela noma Ukufa" (Futhi ucabanga ukuthi le slogam yayiwukuphela kukaBrazil kuphela ...)
Kuze kube yi-1964, "ama-super power" asekelwa kuphela ". Kodwa i-US yanquma ukuya empini ngokuhle. Kukholelwa ukuthi izizathu zaziyizi:
Hlola isikhali sakho esisha.
Bonisa amandla kwamanye amazwe.
Thola ithonya le-geopolitiki esifundeni.
Kodwa banquma ukuya ngqo ezindizeni, okungukuthi, kusukela ekuqhumeni kwamabhomu. I-3 iye yasungulwa izikhathi eziningi eVietnam kunayo yonke iMpi Yezwe II. Kulinganiselwa ukuthi i-6.7 yayiyizigidi zezigidi zamabhomu kuphela ngaphezu kweVietnam (ngaphezu kweminyaka eyi-10 yempi). Ngaphezu kwalokho, cishe amalitha ayi-80 wezidakamizwa adilizwa ensimini. Njengoba behluleka ukuthola i-vietcongues lo mbono kwakuwukubabulala lapho beyikhona. Ngakho amasu afaka: ukuqhuma kwamabhomu, (ukugwema ukuxabana phakathi komuntu nendoda); umlilo ukushisa amahlathi nokuveza izindawo zokufihla; kanye ne-toxin ukugwema lelo zwe elashiswa emuva ukuze libe nesembozo semifino futhi luthinte izenzo zaseMelika.
Dude, ngicabanga lokhu okungaphezu kokuthi "Ukuqhuma kweGalactic" (ukukhishwa kwe-Zodiac Knights Saga).
Uyazi isithombe phezulu lapho kumnyama nomhlophe nezingane ezigijima futhi iziqhumane ngemuva? Yebo, kuthathwe ngokushesha ngemva kokuhlaselwa kwe-napalm. Futhi isithombe sagijima emhlabeni ubonisa ukushaqeka kwempi engenamsebenzi. Ngabe akekho omunye wamandla amakhulu afuna ukunikeza futhi avumele isifunda sibe yisizwe esizimele. Futhi ngenxa yalesi sithombe, ukushicilelwa okuningi nokuncintisana okuvamile e-United States, lapho abantu beya emigwaqeni beyocela ukuphela komlilo nokuhoxiswa kwebutho laseMelika. ekugcineni kwaholela i-US ukuba ihoxise futhi iqala ukuhoxisa ebuthweni. E-1973 i-US yasayina lesi sigameko futhi yaqala ukuhoxisa amasosha. Okwamanje okwathatha cishe iminyaka engu-2 edlule.
Futhi ngokuxoshwa kwamabutho aseMelika eNorth Vietnam nge "ukwesekwa" kweSoviet Union wabuyisela eNingizimu neVietnam futhi wasungula iRiphablikhi yaseRiphabliki yaseVietnam.
Futhi lokhu kubhekwa ngokuthi yiyona "enkulu ukunqoba kwamaMelika" emhlabeni jikelele.
Ngokuyinhloko, ngicabanga ukuthi ukunqotshwa kwavela eFrance, eJapane, eSoviet Union, e-United States futhi ikakhulukazi eVietnam, eyayihlehlisiwe indlu futhi akekho owake wahlala ekusizeni ukulungisa kabusha ngemuva kokuhamba. Angicabangi ukuthi kukhona abaphumelele. Ngami, wonke umuntu ulahlekile.
I-toxins echithekile yenza ukuthi imiphumela emibi ibe khona kuze kube yimanje ku-fauna kanye ne-flora. (okungaphezu kweminyaka engu-40 kamuva), futhi imiphumela yaso kubantu ibonakala njengokukhuphuka kwesisu, i-parkinson, i-malformation ye-fetal.
Yebo, kukhona ukubonakaliswa kokuthi siye saqala kangakanani noma safunda, ngoba sasinezimpi e-Iran, i-Iraq, iSiriya, i-Afghanistan. Ingabe lezi zimpi ngeke zikhuthazwe ngokumane zihlolwe yimpi? Ingabe kukhona uma kukhona inkolelo yalolu phiko ngemuva? Ngiyishiya kunoma ubani ofuna ukuphawula emazwaneni asenhloko.
Ngiyathembisa ukuthi okulandelayo eVietnam kuzoba ngukuhlangenwe nakho kohambo futhi angikusho lutho ngezimpi ezilungile ?!
Kuhle futhi muva nje ngezwa ukuthi iVietnam ingaphansi komyalo wongameli wayo. Ngithemba ukuthi izinto zizoba ngcono lapho. Kwangathi ukushona kwelanga kungase kube kuhle njengakuqala. Inhlanhla kuDanh Thi Ngoc Thinh umbusi omusha.
Futhi njengethiphu lokugcina lomkhumbi wesikhathi sokuqala eVietnam ozohamba ngaphakathi kweVietnam noma ezweni elingumakhelwane ngishiya isixhumanisi se-bookaway esilula futhi kulula ukuhlela uhambo oluku-intanethi.
Kuze kube okuthunyelwe okulandelayo!
Chofoza kumephu uphinde ubone ezinye izikhala. (I.
Umcibisholo United States I-2WW I-American amabhomu ukufakwa kokucindezela United States United States impi Ho Chi Min Japan Saigon impi yesibili I-Soviet Union i-vietcongues IVietnam
1 amazwana	Shiya amazwana >
Pingback: Uzizwa kanjani ukuthi ungumalimi? (IVietnam) - 1aviagemPlay
#kitty #domingou #caixadepapelao Into enhle ngobelula ukuthi ijabule nokuncane. Ibhokisi le- # lingaba indawo enhle yokucasha. Kufana nento entsha. #Cat + ibhokisi lekhadibhodi lilingana #success. Jabula nokuncane futhi ungajabula nokuningi. #kittens #playing #around #enjoyyourweekend #sunday
Futhi ngubani owathi awukwazi #ukuthola isithombe? Ngubani ofunda #travel nesiphakamiso sokufunda #1aviagem.com kungenzeka kube okungekho ngaphandle kokuthi "Emhlabeni wonke ngezinsuku ezingama-80 zeJues Verne. Kukhona # isenzo kukhona # kungenzeka ukuthi kukhona # okungalindelekile futhi kucishe kube usuku lokugcina lwalesi #quarentena Ezinye iziphakamiso zokufunda ziku- 1aviagem.com #fiqueemcasa #leia #travel #stayAtHome #read #travelthroughtheworld
Bheka nje kimi #eyes engizokuhlasela! #cat #playing they #loveit